February 16, 2022 February 16, 2022 topzena10
(TOI)- Hoggantoonni Paartii Badhaadhinaa gaaffii uummataa deebisuuf qophiidha jechuun Waajjira Muummee Ministeeraatti qindeessaan giddugala ijaarsa sirna diimokiraasii Dooktar Biqilaa Hurriisaa ibsan. Dooktar Biqilaa kana kan jedhan dheengadda galgalaa turtii bilbilaan Faanaa waliin taasisaaniidha. Tibba kana leenjii gamaaggama beekumsa, kalaqaa, namuusaa fi ilaalchaa hoggantoota olaanoo gaggeeffamuu himaniiru. Hoggansi hojii isaa bu’aa isaa qofaan madaaluu akka qabu, […]
Magaalaa Baabbileetti Meeshaaleen Kontiroobaandii Birrii Miiliyoona 4tti Tilmaamamu To’atame
January 27, 2022 January 27, 2022 topzena10
Godina Harargee Bahaa Magaalaa Baabbileetti meeshaaleen Kontiroobaandii Birrii miiliyoona 4 olitti tilmaamamu to’atamuu Poolisiin Godinichaa beeksiise.Naannoo Somaalee ka’uun karaa faqii jedhamuun darbuuf wayita socho’aa ture Poolisii magaalaa Baabbileen to’atamuu Qindeessaan Diivizyiinii Kominikeeshinii fi Miidiyaa Poolisii Godinichaa Inispeektar Tolasaa Goshuu Faanaa Broodkaasting Korporeetiif himaniiru. Meeshaaleen garaagaraa Birrii miiliyoona 4.1 olitti tilmaamamu to’atamuu ibsaniiru.Konkolaachisaan meeshaalee kanneen fe’ee […]
Aanaa Booraatti Miseensonni Shanee Nageenya Booressaa Turan Harka Kennatan
January 26, 2022 January 26, 2022 topzena10
Waamicha mootummaan qaamoleen seeraan ala socho’an karaa nagaan harka akka kennataniif taasiseen Aanaa Booraatti miseensonni Shanee nageenya booressaa turan harka kennuu ibsame. Ergama garee badii galmaan gahuuf miseensonni Shanee Aanicha keessatti nageenya booressaa turan, waamicha abbootii gadaa taasisaniifiin harka kennachuu Bulchaan Aanaa Booraa obbo Gosaa Xilaa ibsaniiru. Miseensoonni garee badiif ergamaa turan, dogoggora isaaniirraa akka […]
M.M.M.W Ariifachiisaa 2ffaa Gaggeesseen Turtiin Labsii Yeroo Ariifachiisaa Akka Gabaabbatu Murtoo Dabarse
(FBC) – Manni Maree Ministirootaa walga’ii Ariifachiisaa 2ffaa guyyaa har’aa gaggeesseen turtiin labsii yeroo ariifachiisaa akka gabaabbatu murtoo dabarseera. Manni Marichaa labsii yeroo ariifachiisaa balaa birmadummaa biyyaarratti aggaamame ittisuuf ba’e lakkoofsa 5/2014 ilaalchisee yaadata murtoo dhiyaateerratti mari’achuun murtoo dabarseera. Balaa gareen shororkeessaa ABUT fi jaallewwan isaa birmadummaa biyyaarratti aggaaman seera idileen ittisuun waan dadhabameef Manni […]
MNO, Dargaggoota Oromoo Dogoggooraan Shaneetti Makamaniif Waamicha Dhiyeesse
Mootummaan Naannoo Oromiyaa dargaggoonni Oromoo karaa dogoggoraan farrummaa garee shororkeessaa shaneetti osoo hin hubatiin itti makaman hundi karaa nagaan harka akka laataan waamicha dhiyeessera. Guutuun ergichaa akka armaan gadiin dhiyaateera:- Humni shoroorkeessaa Shaneen kaleessaa hanga har’aatti caba siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa ummata Oromootiif sababa ta’uurraa kan hafe akeekaa fi kaayyoo siyaasaa dantaa saba bal’aa milkeessuu […]
Aadde Adaanech Abeebee Artist Alii Birraa Gaafatan
Kantiibaan Magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee Artist Alii Birraa mana jireenyasaatti argamuun gaafataniiru. Seenaa Muuziqaa Oromoo fi Ityoophiyaa keessatti ashaaraa guddaa kan qabu, nama aartii jaalatamaa fi qabsaa’aa bilisummaa Doktora kabajaa Artist Alii Birraa mana jireenya isaatti argamuun daawwachuu kootiif gammachuun natti dhaga’ameera jedhan ergaa gama miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniif. Artist Alii Birraaf fayyummaa gaarii […]
December 31, 2021 December 31, 2021 topzena10
Waajjirri Simannaa Kaadhimamtoota Komishinaroota Komishinii Maree biyyaalessaa hundaa’uu ibsameera. Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa walgaa’ii addaa 2ffaa guyyaa kaleessaa gaggeesseen labsii Komishinii maree biyyaalessaa hundeessuuf ba’e raggaasiisuun kan yaadatamuudha. Wixinichi Labsii lakkoofsa 1265/2014 jedhamuun kan moggaafame yoo ta’uu, keewwata 12 muraa 1 jalatti Af Yaa’iin Mana Maree Bakka Bo’uuta Uummataa miseensota komishinichaa Ummataa, Dhaabbilee Siyaasaa […]
Hoggantoonni hojii mootummaa Federaalaa olaanoon haala waqtaawaa biyyarratti guyyaa mari’ata jiru. Mootummaan dirqamaan kan itti seenee waraanaa birmadummaa boqonnaa jalqabaa injifannoo xumuruu hordofee, injifannoon hunda galeessaan argamee eeguun nageenyaa waaraa gara misoomaatti ceesisuurratti kan xiyyeeffatee mariin gaggeeffameera. Injifannoo argamee hordoofee qormaatilee siyaasaan, diinagdee, namoomaa fi nageenyaa dhufuu danda’aan dandeettiin furuu fi sirnaan hogganuun xiyyeeffannoo walqixaa […]
December 22, 2021 December 22, 2021 topzena10
Wareegamni Ajajni Kaaba lixaa Adda Gaashanaatti raawwate bara baraan ni yaadatama jechuun Etaamaajoor Shuumiin Raayyaa Ittisa Biyyaa Ityoophiyaa Jeneraal Birhaanuu Julaan ibsaniiru. Adda waraanaa Gaashanaatti raayyaa ittisa biyyaaf sagantaan galateeffannaa kan qophaa’ee yoo ta’uu, gareen shororkeessaa ABUT baatiiwwan shaniif iddoo ijoo kan taatee Gaashanaa to’atee wayita tureetti uummatarratti ajjechaa fi miidhaa garaagaraa qaqqabsiisuu Jeneraal Birhaanuu Julaan […]
December 6, 2021 December 6, 2021 topzena10
Yaa’ii Waliigalaa Dhaabbata Turiizimii Adduunyaa 24fa Ispeen, Magaalaa Maadriiditti taa’ameen Haroon Wancii naannawa turiizimii bara 2021 ALA filatamaa ta’uun filatameera. Harichi mandaroota turiizimii 170 keessaa dursa qabatee filatamuun ibsameera. Haroon Wancii, naannawa turiizimii filatamaa ta’uun kan filatame qabeenya uumamaa hedduu waan of keessaa qabuuf ta’uu Ministirri Turiizimii Ambaasaaddar Naasisee Caalii himaniiru. Haroon Wancii, Mandara Turiizimii […]
Abbootiin Gadaa Sikkoo- Mandoo dargaggoota Godina Arsii miseensa Shanee ta’anii bosonatti galuun diina waliin turan dhiifama gaafachuun hawaasatti makamuu akka qaban Abbaan Gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa ibsan. Abbaa Gadaa Goobana ibsa kaleessa Gaazexaa Bariisaatiif kennaniin akka jedhanitti, qaamni mufatee daggala jiru wayita waamichi taasifamuufi hawaasatti makamu adeemsa Sirna Gadaa kan hordofe ta’uu qaba. Sirni Gadaa […]
December 2, 2021 December 2, 2021 topzena10
Injifannoon Baahaa fi Lixaatti argamee giddugala biyyatti akka irra deebi’uu Muummeen Ministiraa FDRI Abiy Ahimad himaniiru. Muummeen Ministiraa kana kan dubbatan adda waraanaa ijoo sadaffaatti argamuun raayyaa ittisa biyyaa waliin wayita mari’atanittidha. Oppireeshinii tibbana taasifameen dabalataan magaaloonni humna shororkeessaa ABUT qabaman bilisa akka ba’an kan ibsan yoo ta’u, gareen kun meeshaalee waraanaa kamiyyuu fudhatee akka […]
Preezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan qeerroo fi qarree Oromoof Waamicha dabarsaniiru. Ummanni Oromoo yeroo biyyi rakkoo keessa galtuu fi birmadummaan biyyaa sarbamutti dirqama gootummaa olaanaa fudhachuu fi bahachuun kan beekamu ta’uu ibsaniiru. Guutummaan Isaa Akka itti aanutti dhiyaateera:- Ummanni Oromoo saboota, sablammootaafi ummattoota Itoophiyaa biroo waliin ta’uun dhiigaafi lafeen biyya guddoo Itoophiyaa ijaare. […]
November 11, 2021 November 11, 2021 topzena10
Keessummaan keenya har’aa hayyuu Siyaasaa Jaal Leencoo Lataa Waaqayyoo yoo ta’an, gaafdeebii dhimmoota wayitiifi kanneen biroorratti isaan waliin taasifne akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessineera. Bariisaa: Bara, bakka dhalootaafi haala barnoota keessanii gabaabaatti utuu nuuf ibsitanii? Jaal Leencoo: Ani ALA bara 1943 abbaa koo Luba Lataa Waaqayyoofi haadha koo Aadde Hambisee Gorbaa irraan Oromiyaa Lixaa Magaalaa Dambi […]
Kutaan Diinagdee Albuudaa Guddina Diinagdee Ityoophiyaaf Abdiidha – Injiinar Taakkalaa Uumaa
September 9, 2021 September 9, 2021 topzena10
Bara baajataa darbe Warqee Kiiloo Giraama kuma 9 fi 384.284 gabaaf dhiyaaterraa Galiin Doolaarri miiliyoonni dhibbi 6 fi miiliyoonni 71 ol argamuu Ministeerri Albuudaa fi Boba’aa beeksiise. Bara baajataa xumurame Warqeen Kiiloo Giraamni Kumni 8 fi 596 mala aadaan, Kiiloo giraamni 788.25 ammoo dhaabbilee oomisha Albuudarratti bobba’aniin oomishamuu Ministeerichi ibseera. Warqee alatti ergameerraa Galii Dooraara […]
Sirni Awwaalcha Weellisaa Alamaayyoo Isheetee Raawwate
September 7, 2021 September 7, 2021 topzena10
(FBC)- Sirni awwaalcha Weellisaa Alamaayyoo Isheetee raawwateera. Sirni awwaalcha Weellisa Alamaayyoo Isheetee Kaateediraalii Sillaasee Qiddiist Maanbaaraa Tsaabaa’ootitti raawwateera. Har’a addababaayii Masqalaatti sirni gaggeessaa reeffa weellisicharratti itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanach Abeebee fi hoggantoonni mootummaa biroon, maatii, dinqisifattoonnii fi ogeeyyiin aartii argamaniiru. Sirni awwaalch Weellisa Alamaayyoos bakka maatiin firoottanii fi dinqisifattoonni isaa argamaniitti raawwateera. […]